Ahoana ny fomba hamafana ny backups TimeMachine | Avy amin'ny mac aho
Ignatius Room | | Mac OS X, Fampiharana hafa ho an'ny Mac
Ny backup amin'ny tontolon'ny informatika dia zavatra mifandraika amin'ny fitoniana. Ny rafi-piasana tsirairay dia manolotra rafitra hamorona nomaniny ho solon'izay, raha sendra misy lesoka lehibe ao anaty kapila mangirana izahay, aza very daholo ny fampahalalana notahirizinay tao. Saingy tsy io irery no asany. Zava-dehibe hatrany ny fanaovana kopia backup raha te hametraka ny kinova farany an'ny rafitra fiasa izay natomboky ny orinasa isan-taona raha sendra misy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny ary tsy maintsy manomboka mametraka avy am-boalohany amin'ny alàlan'ny famolavolana sy famoahana ny atiny rehetra isika napetrakay na notahirizinay tamin'ny Mac.
Fa ankoatr'izay, ny Time Machine dia mety amin'ny famerenana ireo rakitra izay nofafantsika tsy nahy ary tsy hita ao amin'ny lahatahiry ao amin'ny kapila mangirana. Ny tombony lehibe omen'ny Time Machine antsika raha ampitahaina amin'ireo rindranasa hafa amin'ny fanaovana kopia backup dia izany afaka miditra amin'ireo kopia toa ny kapila kapila isika mba hahafahantsika mijery sy mamerina amin'ny laoniny ireo rakitra raha ilaina, zavatra izay tsy azontsika atao amin'ny rindrambaiko hafa hanaovana kopia backup.
Apple dia manome ny fampiharana Time Machine ho an'ny mpampiasa rehetra rindrambaiko iray ahafahantsika manao kopia voafafa amin'ny atiny rehetra izay efa notahirizinay tao amin'ny Mac anay. fisehoana amin'ny kinova 10.5 an'ny OS X tamin'ny 2007, natao batemy tamin'ny anarana Leopard. Ny Time Machine dia mamorona famerenana rakitra tsy miova izay azo averina indray rehefa ilaina izany. Ny tombony lehibe arosony amintsika dia ny ahafahantsika mamerina mamerina rakitra iray, vondron-drakitra iray na ny rafitra iray manontolo.
Apple dia manolotra safidy maromaro momba ny fanaovana kopia backup amin'ny alàlan'ny Time Machine:
Hard drive ivelany mifandray amin'ny port USB amin'ny AirPort Extreme Base Station, mba hananantsika maimaimpoana foana ny seranan-tsambo rehetra an'ny Mac ho an'ny zavatra ilainay.
Hard drive ivelany mifandray amin'ny USB, FireWire, na Thunderbolt port an'ny Mac. Ity vahaolana ity no haingana indrindra sy mora indrindra satria ny fampidiram-bola tokana tokony hataontsika dia ny an'ny kapila mangarahara.
Time Capsule na OS X Server amin'ny tamba-jotra. Araka ny asehon'ilay anarana hoe Time Capsule, dia toy ny kapsily isam-potoana izay anaovan'ny Time Machine ny famerenam-bidy fanampiny an'ny Mac antsika. Ny tombony lehibe omen'ity rafitra ity antsika dia ny fananantsika azy io na aiza na aiza ao an-trano satria ny fifandraisany dia amin'ny alàlan'ny Wi- Fi. Mba hanaovana backup voalohany amin'ny Time Capsule dia tsara kokoa ny manao azy amin'ny alàlan'ny tariby tambajotra, mba ho haingana kokoa ny dingana noho ny Wi-Fi.
Amin'izao fotoana izao ny vidin'ny kapila SSD dia nilatsaka be ary afaka mahita azy ireo amin'ny vidiny mora be isika. Ny kapila mafy SSD dia manome antsika hafainganam-pandeha haingana kokoa sy haingam-pandeha noho ny kapila mangarahara nentim-paharazana, noho izany mpampiasa maro izay misafidy ny hanatsara ny kapila mafy Mac ho an'ny iray amin'ireto karazana ireto. Ity fanovana ity dia manolotra fiainana vaovao ho an'ny Mac amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fanombohana ny OS X sy ny fanatanterahana ireo rindranasa napetraka.
Fa koa, raha hividy kapila mafy ivelany hanao kopia voafafa isika, tokony handinika ny safidy amin'ny maha-SSD isika, satria ny fotoana famoronana ny kopian'ny backup dia hihena ho fanampin'ny famelana antsika hiditra amin'ireo backup hafa izay ataontsika amin'ny fomba haingana kokoa.
OS X dia namboarina ka isaky ny mampifandray kapila mafy amin'ny USB an'ny Mac isika anontanio anay raha te hampiasa azy io izahay hamoronana kopia backup amin'ny alàlan'ny Time Machine. Raha mazava amintsika amin'izany fotoana izany fa te hampiasa an'ity kapila ity ity isika hitahiry kopia nomaniny ho solon'izay, dia hifidy Hampiasa an'ity kapila ity isika, raha tsy izany, raha toa ka nampifandray kapila mangalatra izay tiana hakana angon-drakitra isika dia tsy maintsy manindry Do tsy ampiasaina.
1 Ahoana ny fiasan'ny Time Machine
2 Maninona no ela be vao vita ny kopian'ny masinina
3 Ahoana ny fomba hamafana ny backups an'ny Machine Machine
4 Ahoana ny fomba hamafana rakitra na rakitra amin'ny backup Machine Machine
5 Manafainganana kopia amin'ny Time Machine
Ahoana ny fiasan'ny Time Machine
Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, ny Time Machine dia ny rafitra backup an'ny OS X, izay manome anao ny mety tazomy foana ny fiovana ataontsika amin'ny Mac. Ny Time Machine dia manao kopia nomaniny ho an'ny 24 ora farany, ora iray isan'andro, tamin'ny volana lasa ary nomaniny ho solon'izay isan-kerinandro. Rehefa feno ny kapila ampiasaintsika hanamboarana ny backup dia voafafa ho azy ireo kopia tranainy indrindra.
Maninona no ela be vao vita ny kopian'ny masinina
Raha mbola tsy nanao backup amin'ny Time Machine isika, dia azo inoana fa ny kopia voalohany dia maharitra adiny maromaro vao vita, miankina amin'ny habetsaky ny rakitra ananantsika sy ny karazana azy ireo izany. Ny famerenana rakitra 20.000 20.000 Word dia tsy mitovy amin'ny famerenana hira 3 XNUMX amin'ny endrika MPXNUMX. Ny tombony lehibe atolotry ny Time Machine antsika dia izany ny backup rehetra ataonao dia tsy misy afa-tsy ny fisie izay novaina na nampiana hatramin'ny fisokafana faranyNoho izany, rehefa efa nanao ny backup voalohany isika, dia tsy mandany fotoana firy ireo nifandimby raha tsy hoe nanampy rakitra tahiry be dia be izahay, izay hampihena ny backup hatrany.
Ahoana ny fomba hamafana ny backups an'ny Machine Machine
Raha misy antony ilaintsika hamafana ireo backup voalohany indrindra, satria io kapila mafy io dia ampiasaina hanatanterahana asa hafa. afaka manatanteraka an'io tanana io tanana isika tsy miandry ny fametahana kapila mafy ary tsy afaka mampiasa azy io amin'ny filantsika hafa.
Voalohany, mankany amin'ny kisary Time Machine isika, miorina eo amin'ny baran'ny menio ambony ary aseho amin'ny famantaranandro analog miaraka amina zana-tsipika mihodina mifanohitra amin'ny famantaranandro. Ao anatin'ny menio milatsaka izay hiseho no hofidintsika Ampidiro ny Machine Machine.
avy eo ny backup rehetra dia haseho tsirairay avy ary izay voalohany no farany namboarina. Eo ankavanan'ny backups dia manondro ny andro nanaovana ny backup. Raha te hahita ilay kopia tadiavintsika hamafana haingana kokoa, dia afaka mandeha eo amin'ny sisiny ankavanan'ny efijery isika ary hikorisa amin'ny daty voatondro.
Raha vantany vao miseho ny fikandrana amin'ny backup izay tadiavinay hamafa, dia tsindrio ny kodiarana ary mifidy Fafao ny backup. OS X dia hampiseho amintsika afisy manamarina fa te-hamafa ny backup ho an'io andro io izahay. Mba hanamafisana izany, mila tsindrio fotsiny ny Accept.
Ary farany, hamafana ny rafitra nomaniny ho solon'izay ilay rafitra, izay afaka minitra vitsy, OS X hangataka ny tenimiafin'ny mpampiasa anay, hanamarinana fa mpampiasa ara-dalàna ireo backup ireo izahay.
Ahoana ny fomba hamafana rakitra na rakitra amin'ny backup Machine Machine
Ny dingana hanesorana ireo rakitra avy amin'ny backup Izy io dia mitovy amin'ny efa nohazavaiko tamin'ny fizarana teo aloha izay nanehoako anao ny fomba ahafahantsika mamafa backup iray manontolo. Mety tsara ity safidy ity raha te hamafa rakitra iray izay manana lanja mavesatra amin'ny kopia nomaniny ho solon'izay ary mamela antsika hahazo toerana fanampiny, toy ny rindranasa na sarimihetsika.
Voalohany, handeha ho any amin'ilay kisary soloin'ny famantaranandro misy ao amin'ny bira fisakafoana ambony izahay ary hisafidy Ampidiro ny Machine Machine.
Ankehitriny dia tsy maintsy mankany amin'ny varavarankely isika mampiseho amintsika ny backup farany amin'ny fisie izay hamafa anay.
Raha vantany vao hitantsika ilay rakitra resahina, dia tsy maintsy tsindrio eo izy ary kitiho ny kodiarana lamba mba hanomezany antsika safidy isan-karazany azontsika atao miaraka aminy. Hisafidy hamafana ny kopian'ny backup misy ny "fisie rakitra na anaran'ny lahatahiry" isika. Amin'izany fomba Time Machine hanaisotra izay soritra rehetra amin'ny backup rehetra izay efa vitantsika hatreto amin'ireo rakitra na lahatahiry ireo.
OS X dia hangataka anay fanamafisana mba hanatanterahana ny famafana ary hangataka izany ihany koa izahay andao ampidiro ny teny miafina an'ny mpampiasa io backup io, izany hoe ny tenimiafinay.
Manafainganana kopia amin'ny Time Machine
Etsy ambony no nanehoako hevitra fa ny backup voalohany ataonay amin'ny Time Machine mety haharitra ora maromaro isika arakaraka ny atiny izay efa notahirizinay tao amin'ny Mac anay sy izay tianay hatao. Ny kopia taty aoriana satria mifantoka amin'ny rakitra vaovao fotsiny dia kely kokoa ny fotoana fanodinana.
Raha matetika ianao no manao kopia backup miaraka amin'ity rindranasa ity dia ho hitanao izany tsy fantatray mihitsy hoe rahoviana no misy backup satria ny rafitra dia manome laharam-pahamehana ny fanatanterahana ny rindranasa sy ny fiasan'ny rafitra ankapobeny fa tsy ny backup, izay amin'io fotoana io dia faharoa.
Indraindray dia nila nanao kopia fampahalalana marobe amin'ny Mac sy mila manao kopia amin'ny Time Machine haingana araka izay tratra isika. Amin'ireto tranga ireto dia afaka mampiasa baiko manova ny safidin'ny rafitra isika, manome loharanom-pahalalana betsaka kokoa noho izany ny Time Machine, noho izany dia hisy fiantraikany amin'ny fiasan'ny Mac. Mba hanaovana izany dia mila manokatra Terminal fotsiny isika, ary manoratra ity baiko manaraka ity:
Raha mampiasa kinova taloha an'ny OS X ianao, alohan'ny El Capitan ary tsy mandeha ny baiko teo aloha, andramo ampio ny masontsivana –w mba hitovy amin'ny azy izao:
Ho an'ny OS X hanovana an'io fanovana io, dia halefa any amin'ny tenimiafin'ny mpampiasa indray izahay. Tadidio fa azo averina io baiko io, mila fotsiny isika hamerina ny Mac ka lasa backup background indray ny backup
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Fampiharana hafa ho an'ny Mac » Ahoana ny fomba hamafana ireo backups TimeMachine
Salama haka sary na horonantsary avy amin'ny solosaina mampiasa Jing 2, azo jerena ao amin'ny pejy paoma.
Fa manana fanontaniana aho. Nanana ny kopian'ny masinina aho tamin'ny kapila 200 gb fotsiny, ary ankehitriny te-hanova azy amin'ny Capsule aho, saingy tsy haiko ny mamindra ny atiny. Nisafidy ny hamerina ny solosainako sy ilay kapila ivelany (ilay taloha) aho, saingy milaza amiko fa tsy manana fahaiza-manao ampy izy io. Ary azo antoka fa tsy afaka mamerina ny angon-drakitra ianao avy eo. Hainao ve ny manao azy?
zanoo dia hoy izy:
MISAOTRA ANAO! Adala aho nitady an'ity fampahalalana ity! 😀
Mamaly an'i zanoo
famonoana dia hoy izy:
Niezaka ny hamafa fisie marobe avy amin'ny backup TM aho mba "hanify" ny HD ivelany fa tsy mahavita azy.
Rehefa manokatra ny backups.backupdb aho ary mitady, ohatra, ny milina virtoaly Windows XP ho an'ny VMWare Fusion, izay mitana eo amin'ny 3 Gb isaky ny backup, tsy mamela ahy hamafa na inona na inona izany. Ao amin'ny menio «cogwheel» no azoko fotsiny ny safidy mahazatra: fampirimana vaovao, sokafy, mahazoa vaovao, averina ...
Inona ny kinova OS X ampiasainao?
Ahoana ny fahasarotan'ny famonoana ireo backup'ny TM?
Valiny amin'ny famonoana
diego.mo dia hoy izy:
Manana fanontaniana manokana momba ny TM aho:
- ny backup tsirairay (isan'ora, ny 24 ora farany; isan'andro amin'ny herinandro lasa, isam-bolana tamin'ny taona lasa…) dia mitahiry ny atin'ny kapila anatiny, na ireo rakitra ihany no novaina hatramin'ny nanefana farany?
- raha toa ka nanao programaTM tao amin'ny Eny (backups isan'ora) aho, ary nesoriko ny HDD ivelany?
- arakaraka ny fahazoako azy, azoko atao ny mamafa ny rakitrao rehetra ao amin'ny lahatahiry antontan-taratasiko (rehefa nanao backup tamin'ny TM alohan'ny famafana azy ireo), hanafahana ny kapila anatiny (ireo folder sy programa napetraka fotsiny), ary hamerina ireo rakitra rehetra tao amin'izy ireo?
- mifandraika amin'ny fanontaniana teo aloha, miasa toy ny disk ivelany ve ny backup? izany hoe, azoko atao ve ny manokatra antontan-taratasy amin'ny mac hafa avy amin'ny disque backup TM, na tsy mila mamerina azy amin'ny disk anatiny-ko?
- miaraka amin'ny rindranasa hafa (indrindra ny Retrospect Express) (niaraka tamin'ny HD iomega ivelany aho) azo atao ny manao kopia backup (backup) amin'ny singa samihafa (mahita mialoha fa tsy mahomby ny iray amin'izy ireo)… azo atao ve izany amin'ny TM?
misaotra anao, antenaiko fa misy afaka mamaly ahy
Valio any diego.mo
Turagura dia hoy izy:
Salama, nahita vahaolana haingana sy tsotra ary mahomby aho ary misy izany, rehefa mifandray ny kapila mangirana izay nanaovanao milina fotoana, miditra fidirana kapila, safidio ny kapila mafy, eo amin'ny fipihana ambony eo amin'ny famafana, amin'ny bokotra ankavanana ambany amin'ny famafana sy voila! =)
Mamaly an'i Turagura
vaovao tsara misaotra
Maka sary Time Machine: cmd + shift + 3 ary ny sary nalaina tamin'ny efijery iray manontolo dia voatahiry eo amin'ny birao.
hiandry aho dia hoy izy:
Te-hametraka rakitra vitsivitsy aho…. tsy ny rehetra!!!! ahoana no anaovako azy
Raha hamafana ireo kopian'ny backup an'ny TM ary hanadio azy amin'ny andro voalohany dia jereo ity lahatsoratra paoma manaraka ity izay manazava azy tsara, ary tsy misy ifandraisany amin'ny hevitr'ireo forum izay ao amin'ny Internet.
Miala tsiny fa ity ny rohy:
Fetsy ratsy no nanjo ahy ...
Tsy manazava izy ireo raha mankany amin'ny fako ireo rakitra voafafa rehetra. Misy ifandraisany amin'ny fitriatry ny kapila mafy ve ny famafana an'io rakitra be io avy amin'ny fako?